မှော်ဆရာ သိတဲ့ ဧရာဝတီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » မှော်ဆရာ သိတဲ့ ဧရာဝတီ
မှော်ဆရာ သိတဲ့ ဧရာဝတီ
Posted by မှော်ဆရာ on Nov 29, 2011 in Photography, Travel | 17 comments
မှော်ဆရာ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနဘေးက ရွာလေးတစ်ရွာကို ဓါတ်ပုံရိုက်သွားရင်း ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေပါ …။ မှော်ဆရာ သိတဲ့ ဧရာဝတီလို့ပဲ ခေါင်းစဉ် တပ်လိုက်ပါတယ် …..=
အေးအေးဆေးဆေး ငါးထိုင်မျှားတာပဲ ကောင်းပါတယ်နော .....
fish eye မကိုင်နှိုင်သေးပါဘူး အန်ကယ်ရယ် … ကျွန်တော်တို့လို ၀မ်းရေးအတွက် ဓါတ်ပုံရိုက်နေရတဲ့ သူတွေအတွက် fish eye ဆိုတာ အသုံးမတည့်ပါဘူး။ လူပုံကို fish eye နဲ့သာ ရိုက်ပေးလိုက်လို့ကတော့ အဲဒီ့မော်ဒယ် ကျွန်တော့ကို အသေသတ်ပြီပေါ့ …။
အဲဒီ့ ဓါတ်ပုံက fish eye ကို photo shop ထားရတာပါ။ လိုတော့လိုချင်သားဗျာ …။ ဒါပေမယ့် ၀ါသနာကို ရှေ့တန်း မတင်အားသေးပါဘူး အန်ကယ်ကြီးရေ …။
ဟီး .. ခံရဖူးတယ် ဗျာ .. ကျွန်တော့ စုံတွဲ (ကြွားတယ်လို့ လဲ မထင်စေချင်ပါ။) ပုံ ကို ဘိုးတော် က Wide နဲ့ ကစ်တာ .10-22 နဲ့ လားမသိဘူးဗျ။ ကိုယ်ကလဲ အဲ့တုန်းက ဘာမှ မသိဘူးလေ….. ပုံကြည့်တော့မှ .. လက်မောင်းကြီး … ကြီးလှချီလား ပေါ့ … အဲလို .. ကြုံဖူးတယ်။ ပုံလေးတွေ ငြိမ်တယ်ဗျာ။ နေပူ ခံပြီး ရိုက် ထားတာကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။
တော်သေးတာပေါ့ လက်မောင်းတင် ကြီးလာလို့ …
(နှာခေါင်းကြီးလာရင် ကြည့်မကောင်းဘူးလို့ ပြောတာပါ)
ဆြာက မန့်ဆိုတော့ တပည့် မန့်ရပါပီခည ….
၁၈-၅၅မမ နဲ့ ဆွဲထားတယ်မှတ်တယ်..
ငါးမြှားတဲ့ပုံလေးကိုတော့ အထူးပဲ သဘောကျမိတယ်ဗျို့ …
reflection နဲ့ ဆော်ထားတာ အတော်လှတယ်…candid ….ဗျို့ ..
သည်မြင်ကွင်းကိုပဲ နောက်၂ပုံလောက် ထပ်ဆွဲစေချင်တာဗျာ …..
နည်းနည်း ၀ိုဒ် တာလေး ၁ပုံနဲ့ ချာတိတ်ကို close-up ဆွဲတာ …၁ပုံ …
ငါးမျက်စိ ကခင်ဗျားပြောတာ လက်ခံရ နည်းနည်းခက်တယ်..
(ဟိ. ..ချီးကျူးပြီးပီဆိုတော့ ကန့်လန့်ပြောခွင့်ရဘီ….)
လူပုံ ရိုက်လို့ရပါတယ်ဗျ ..creative shots တွေပေါ့…
(ဒီတေးလ်တော့ ကျောကျလော့ဝူး …ဒါ ထမင်းအိုး ခစ်ခစ်…)
မော်ဒယ်ကို မှာထား …နင် ငါ့မျက်ခွက် ခြေနဲ့မခတ်နဲ့နော်လို့ …သေချာမှာ
ပီးရင် မော်ဒယ်ကို ရှေ့တည့်တည့်က မဟုတ်ဘဲ ၄၅ဒီဂရီ လောက် စောင်းတဲ့ နေရာကနေ
သူ့ ရှေ့ခြေထောက် နား ၆လက်မလောက် အကွာမှာ ပါးကို ကြမ်းပြင်မှာကပ် ပီး ဆော်ပေတော့ဗျို့
low angle (ဟိုဆြာလေး စကားအရဆိုရင်တော့ worm-eye view ပေါ့ဗျာ)
low angle က သေချာချိန်နိုင်ရင် မော်ဒယ်လ် ကွေးကောက်မသွားပါဘူးဗျ…
အဲ့သည့်ရိုက်ချက် က မော်ဒယ်ကို အရပ် ရှည်တယ် ထင်ရစေတယ်ဗျ…
(ဂျပုမလေးတွေကို သည်နည်းနဲ့ လုပ်စားလို့ရတယ်..လျောက်မပြောနဲ့နော်…)
သစ်ပင်မှီရပ်နေတဲ့မော်ဒယ် ကို လူမကောက်ဘဲ သစ်ပင်ချည်းပဲ ကွေးကောက်သွားအောင်
angle တွေ ချိန်လို့ရသေးတယ်ဗျ….
နောက်တခုက low angle မှာ ပစောက်ကွေး high angleမှာ ဂငယ်ကွေးလို့
ကျနော် ဆြာသော့စ် ပို့စ်မှာ မန့်ထားတာ ရှိတယ်မလား … ဟုတ်ကဲ့ angleမချိုးရင်
မကွေးပါဘူးခင်ဗျား …သည်တော့ ultra-wide အနေနဲ့ သုံးလို့ရပါသေးတယ်..
ရှင်ပြုတွေဘာတွေ လှည့်တာကို လူစုလူဝေး နဲ့ လိုကေးရှင်း အားလုံး ခြုံငုံချင်ယင်
သုံးနိုင်တယ်ဗျ. … စုံတွဲတွေအတွက်လည်း သုံးလို့ကောင်းတယ်…
ဆိုလိုချင်တာကငါးမျက်စိဆိုတာ landscaper တွေချည်း သုံးတဲ့
ပစ္စည်း မဟုတ်ပါဘူးဗျာ…creative portrait တွေမှာလည်း သုံးလို့ရပါတယ်…
အထက်ကဆြာ တယောက် မန့်ထားတဲ့ ၁၀-၂၂မမ က (ကန်နွန်ဆိုရင်) ငါးမျက်စိ
မဟုတ်ဘူးဗျ…wide သက်သက်ပဲ ….ကျနော် ၀ယ်ဖို့ချောင်းနေတာကြာပြီ …
မွဲနေလို့ ၀ယ်နိုင်တေးဝူး ….ကျနော့် ငါးမျက်စိရဲ့ counterpart ရှာတာလေ…
ငါးမျက်စိရဲ့ အားနည်းချက်က architectural landscape တွေရိုက်လို့မရသလောက်ပဲဗျ
(ဥပိန် တံတားကြီး ကွေးပစ်လိုက်တဲ့ creative shots တွေကတော့ ချွင်းချက်ပေါ့ဗျာ..)
လောလောဆယ်တော့ တိုကီနာရဲ့ ၁၁-၁၇မမ ကို သဘောကျနေတယ်ဗျ ..အပါချာ ၂.၈
ဆိုတော့ ၀ိုက်ဒ်နဲ့ လူရိုက်ချင်တဲ့ ဆြာတွေအတွက်လက်တို့တာပါနော…..
စပွန်ဆာခေတ်ကြီးမှာ L Series Lens တဆင်စာနဲ့ 5D တလုံး 7Dတလုံး
စပွန်ဆာပေးမယ့် ချစ်လှစွာသော မမကြီးများ ညလေးများကို
ငုတ်တုတ်ထိုင်စောင့်နေတဲ့ အရှေ့ကျွန်းက ဂီဂီ
ဒါဆိုရင် ဂီလေးရဲ့ အဖြေ မှန်ပါတယ်ကွယ် ..
18-55 နဲ့ ရိုက်ထားတာပါ.။မင်္ဂလာဆောင်ဆိုတော့ အပျင်းကြီးပြီး နော်မယ်- ၀ိုက် ပဲ ယူသွားမိတာ ကြာပန်းတွေကို တွေ့တော့မှပဲ ရင်နာမိတော့တယ်.။
ငါးမျက်စိကတော့ ဂီဂီပြောတာ မှတ်ထားပါ့မယ်…။
၁၀ – ၂၂ တောင် မ၀ယ်နှိုင်သေးတာ ငါးမျက်စိကတော့ သားေ၇ ကျရုံတင်ပါ…။
ငါးမျှားတဲ့ပုံလေးက crop ချထားတာဗျ ..။မူရင်းက ဒီထက်ပိုဝိုက်တယ်..။ ဒါပေမယ့် ပြန့်သွားသလားလို့ ဘောင်ကျဉ်းထားလိုက်တယ် ။
စပွန်ဆာမမများတွေ့ရင်လဲ လက်တို့ပါဗျာ …။ ကိုယ့်စားရိတ်ကိုယ်စားပြီး သူ့ကိုပေါင်းပါဆိုရင်လဲ ပေါင်းပါမယ်လို့ …။ ကင်မရာနဲ့ မှန်ဘီလူးအစုံလိုက် ထောက်ပံ့၇င်ကျေနပ်ပါတယ်လို့ ….
(မှတ်ချက် — နှစ်ဖက်ချွန်များမှ လွဲ၍.)
ဓာတ်ပုံတွေ လှတယ်။ ဘီဘီကပ်ပြီး ပညာသင်ဦးမယ် သင်ပေးမှာလားဗျို့ ။
အကြိုက်သိတတ်တယ် … ကြီးပွားဦးမယ် တိုးတက်ဦးမယ် .. ပါမစ်တွေ ရဦးမယ်
ကမ္ဘာကြီးက လုံးမှန်း လှေနဲ့ သောင်ထွန်းနေတဲ့ နေရာကို ကြည့်ပြီး သေချာ သတိထားမိသွားပြီ။ ဟိဟိ
ဆြာမှော်၊ ပုံလေးတွေကို ယူထားတဲ့ အိုင်ဒီယာနဲ့ ရိုက်ချက်လေးတွေ ကြိုက်သဗျို့။
အောက်ဆုံးပုံလေး ကို ဆြာဂီ ပြောသလို ပိုဝိုက်ဒ်တာ ကြိုက်တယ်။
ကလေးငယ်တာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကျယ်ပြီး အေးချမ်းတာ ပိုပေါ်မယ်ထင်လို့။
ပုံက diagonal direction လိုပေါ်နေတာလေးလည်း သဘောကျတယ်။
ဆရာ စိန်သော့ရေ ငါးမျှားတဲ့ပုံက မူရင်းက ဒီထက် ပိုဝိုက်ပါတယ် …
ဒါပေမယ့် အောက်ခြေမရှင်းဘူးခင်ဗျ … အောက်ခြေမှာ ဂုံလျှော်ရိုးတွေ ခြုံတွေရှိတော့ အပေါ်က ထန်းပင်တို့ ခြုံပုတ်တို့နဲ့ သွားပြိုင်သလိုဖြစ်ပြီး အားကျသွားလို့ ခရော့ချ ပေးလိုက်ရပါတယ်..။
အောက်ခြေမှာ ရှုတ်နေတာ……..နော်မှ မသိတာ။
ခုတော့ သိပြီ ဘာကြောင့် ခရော့တာ…………..
နတ်ကရာကြည့်မော ဆိုလား ကြားဘူးပါတယ် မှော်ဆြာရေ။
ဆြာတို့ ရိုက်တဲ့ ပုံတွေကြည့်ပြီး ကျွန်ုပ် ဓါတ်ပုံ မရိုက်ရဲလောက်အောင်ဖြစ်နေပါပြီဗျာ။
မှော်ဆရာလည်း ပညာတွေကို ဒိုင်လျှိုထားတယ် ..ပြီးမှ တကွက်ချင်း ထုတ်သုံးတာ….. လှလိုက်တာ …
ပထမဆုံးနဲ့ ဒုတိယမြောက်ပုံကို သဘောအကျဆုံးပဲ….